Tani waa sheekada astaanta Google | Abuurista khadka tooska ah
Taariikhda astaanta Google
Marar badan ayaan u maleyn karnaa in astaan ​​ku dhowaad dhalatay sida aan ognahay maanta, laakiin badanaa waxay dhacdaa inay qaadato hawl waqti ka dib, xaalado badan, badanaa waa mid aad u muuqda. Ma noqon doonto markii ugu horreysay ee isbeddelada iyo fikradaha astaamaha noocyada kala duwan ay dhex maraan boggeena, sida Adidas, maxaa jiray waa la hagaajiyay si ay ula socoto isbeddellada hadda socda ama u siiso isbeddel wanaagsan si loo soo jeediyo himilooyin kale oo ku dhow adeegyada ay bixiyaan.
Uno Mid ka mid ah tusaalooyinka ugu cad ee tan waa taariikhda astaanta Google, mid ka mid ah shirkadaha teknoolojiyadda ee soo maray safar aad u xiiso badan oo waqti socday si loo barto qaar ka mid ah isbeddelada ugu muhiimsan ee astaanta. Sababtaas awgeed, waxaynu ogaan doonnaa heerarka ugu muhiimsan ee astaanta astaanta u qaadatay waqti si ay u noqoto tan ay maanta tahay taasoo si fiican ugu xardhan maskaxda malaayiin qof oo adduunka ah.
1 Billoowga taariikhda astaanta Google
2 1998, waa sanadkii uu Google midabkiisu sii badanayay
3 1999 waa sanadkii hadhka iyo 3D
4 Sannadkii 1999-kii waxaanan sii wadaynaa inaan u korayno xagga xukunka
5 Sanadihii 2010 ilaa 2013
6 Midabada baro ka soo 2013 ilaa 2015
7 Iyo 2016, Google ee hadda jira
8 Wax walbana halkan kuma sii ekaanayaan
Billoowga taariikhda astaanta Google
Shirkadda ayaa bilaabatay qaado hay'addaada horraantii 1997 markii ay ka soo baxday magacaas hore ee loo yaqaan "BackRub." Sannadahaas oo dhan, labaatankii sano ee la soo dhaafay, shirkaddani waxay soo martay 14 isbeddel si ay u gaarto astaanta aan wada ognahay maanta. Tan waxaan ku cadaynaynaa inaysan ahayn ubax maalin ah, laakiin in mustaqbalkiisa laga shaqeynayay muddo dheer.
Waxay ahayd 1997 markii Larry Page iyo Sergey Brin, maskaxdii fikirka ahayd ee ka dambeysay G weyn, Waxay go aansadeen inay siiyaan astaantaas "BackRub" qallooc lana imaado fikrad midab siin lahayd astaanta ugu horreysa ee Google.
Astaantan waxaa markii ugu horaysay laga helay serverka jaamacada Stanford waxayna nasiib u yeelatay inay sanad dhan socoto ilaa ay heshay taabasho sanadkii 1998.
1998, waa sanadkii uu Google midabkiisu sii badanayay
Kuwaas oo ka mid ah waraaqaha layaabka leh, oo leh midabbo u muuqda in laga soo qaaday shaashad aasaasi ah oo Photoshop ah, taas ayaan ku aragnaa teeb-gareynta ayaa la dalbaday wax walbana qaab ayey u imaanayaan leylis badan oo u muuqda astaan ​​buuxda oo xuddun u ah
Isbedel cusub oo ah waxay la socon lahayd dhacdooyinka shirkadda inay qaadaysay waddo kale taasna waxay ku tusaysaa astaantaas si aad u wanaagsan, oo leh midabadaas soo jiidashada leh, laakiin leh qaabab toosan.
1999 waa sanadkii hadhka iyo 3D
Google ayaa dhaafa si loo xusho hooska iyo saamaynta 3D taasi waxay u oggolaaneysaa aragti ah isbeddelka qaababkaas astaantii sanadkii hore. Saameyntani waxay dareen kale siineysaa astaanta loo wareejiyay ujeeddada midabada aasaasiga ah ee giraanta midabka. Ruth Kedar waxay la timid midabadaas si wanaagsan si ay ugu hesho shirkad leh dareen buuxa oo baashaal ah gacmaheeda.
Si gaar ah, ereyada Kedar, fikraddu waxay ahayd in la muujiyo in Google aysan raacin sharciyada dadka kale, oo sidaas darteed isbeddelka midabka labaad ee «L».
Mid ka mid ah farqiga muuqda ayaa ah taas «G» wuxuu isu beddelay buluug xarafka keliya ee cagaarka ku hadhayna wuxuu ahaa "l". Qaab soconaya ilaa maanta oo aan isbadalin tan iyo sanadkaas.
Sannadkii 1999-kii waxaanan sii wadaynaa inaan u korayno xagga xukunka
Waxa ugu xiisaha badan sanadkaan ayaa ah in astaanta Google, isbedel kale oo aad u xiiso badan, waxay bixisaa sawirka G-weynuhu siinayo adduunka markay bilaabaan inay qabtaan booska wadarta guud ee adduunka oo dhan sida mashiinka raadinta.
Sannad lagu arkay fikrado kala duwan, oo ay ka mid yihiin kaas oo madowgu wuxuu qaataa magac weyn shaqallada ugu horreeyana way is-dhex galaan dhexdooda leh midabada aan wada ognahay.
Yaab aakhirkii in G weyni qaatay go'aanka ah in wax walba la fududeeyo oo leh astaan in ay la mid tahay had iyo jeer, in kasta oo ay jiraan khadad badan oo la qaabeeyey, hoosku si ka fiican ayaa loo arkaa iyo midabbada ay dadku wada ogyihiin
Nos waxaan la sii joogi doonaa astaantan illaa 2010 iyo inay calaamad u tahay daqiiqadda muhiimka ah ee shirkaddu la kulantay inay noqoto mashiinka raadinta heer sare oo beddelaya qayb ka mid ah howlaha malaayiin qof.
Sanadihii 2010 ilaa 2013
Wiilasha Mountain View ka saar hooska oo ka tag astaantaada astaamaha leh midabada had iyo jeer, xitaa si loo iftiimiyo codadka si ay ugu fiicnaadaan isbeddelkaas saddex sano gudahood
Midabada baro ka soo 2013 ilaa 2015
Isbeddel kale oo loogu talagalay astaamaha Google illaa ka hor heerka naqshadeynta sanadahaas taas oo midabada barta ay ka dhacday marxaladda dhexe ee codsiyo iyo adeegyo badan.
Wax ka beddelkaan waxaa sidoo kale lagu sameeyay farta lafteeda in geesaha ay ka jilicsanaayeen iyo si loo fududeeyo akhrinta markay isticmaaleyaashu bilaabeen inay isticmaalaan malaayiin taleefannada casriga ah ee adduunka.
Iyo 2016, Google ee hadda jira
Sannadkii hore waxaan aragnay isbeddel kale oo weyn sidaas Google waxaa lagu qeexay hal xaraf, "G". Qaado dhammaan midabada isku dhafan oo ku dheji midabada barta si aad ugu adeegto aqoonsiga astaanta.
Isbedel ku yimid astaanta taas waxay muujineysaa mustaqbalka shirkadda haysata SO aaladaha mobilada ee inta badan lagu rakibay meeraha taasna waxay badaleysaa wajiga meeraha iyadoo fikradaheeda ugu xiisaha badan loo qabo dhanka Barashada Qoto dheer ama awooda wada hadalka dabiiciga iyadoo lagu mahadinayo macnaha guud ee kaaliyaha Google.
Wax walbana halkan kuma sii ekaanayaan
Waan awoodnaa ka soo qaado mabaadi'da Google is-beddelka qoraalkaagaama. Midka ugu weyni waa isbeddelka isdaba-joogga ah ee aan sidoo kale ku aragnay sida uu uga soo gudbay mashiinka raadinta illaa waxa ka hawlgala nidaamyada kala duwan ee ay u taliyaan aaladaha moobiilka sida taleefannada casriga ah maanta.
Waxaa noo cadaatay taas Google si wanaagsan ayey u ciyaartay kaararkeeda iyo isbeddelka astaanta ayaa muujinaya isbeddeladaas muhiimka ah. Waxaan xitaa goob joog u nahay abuuritaanka Alphabet, isbadal kale oo shirkadu ku sameyso qeybaha kale taasina waxay yeelan doontaa doorkeeda ugu weyn sanadaha soo socda.
Miyaad ka heshay taariikhda astaanta google? Sideed u malaynaysaa inay mustaqbalka u xuubsiibanayso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Taariikhda astaanta Google
Mashaariic xiiso leh oo laga helo Google Open Source